RW Rooble ma kulan qarsoodi ah ayuu la yeeshey Abiy Axmed? | KEYDMEDIA ONLINE
RW Rooble ma kulan qarsoodi ah ayuu la yeeshey Abiy Axmed?
Waftiga uu hoggaaminayo Ra’iisul Wasaare Rooble, ayaa socdaal la qariyay ku tagay Adis Ababa, kahor inta aysan u duulin UK.
MUQDISHO, Soomaaliya - Sida ay muujineyso xogta socdaalka waftiga uu hoggaaminayo Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble, waxa ay shalay gaareen dalka Itoobiya, ka hor inta aysan toos ugu ambabixin Ingiriiska.
War ka soo baxay Xukuumadda ayaa lagu sheegay in RW Rooble, uu u safary UK, halkaas oo uu kaga qeyb gali doono shirka (The Global Education Summit) oo London ka dhici doona labada maalin ee soo aaddan 28-ka iyo 29-ka July.
Hayeeshee, Sida uu caddeeyay, Khariidad sheegaha (MAP), Afyaheenka Xukuumadda, Maxamed Ibraahim Mucalimuu, oo ka mid ah waftiga uu hor kacayo RW Rooble, ayaa, xalay ku sugaaa Adis Ababa, taas oo ka dhigan in xaafiiska Ra’iisul Wasaaruhu uu qariyay socdaalkiisa Itoobiya.
Ma jrto xog rasmi ah oo caddeyneysa in Roole la kulmay dhiggiisa Abiy Axmed, hayeeshee, dadka u dhuun duleela arrimaha socdaalka madaxda ayaa sheegay inuu jiri karo kulan la qariyay oo xalay Adis ku dhex maray labada Ra’iisul Wasaare.
Xukuumadda Rooble, waxaa saaran cadaadis xooggan oo la xariira dhallinyaro Soomaaliyeed oo Kooxda Farmaajo u daabuleen Itoobiya si ay uga garab dagaallamaan ciidanka difaaca dalkaas, oo dagaal kharaar kula jira kooxda TPLF.
Dhanka kale Rooble, wuxuu London kula kulmi doonaa, Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta, oo Raiisul Wasaaraha UK Boris Johnson, la shir guddoomin doona shir madaxeedka looga hadlayo waxbarashada.